ပွင့်လင်းမြင်သာမှု | FLEGT
VPA က ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဘယ်လိုတိုးတက်လာနိုင်စေသလဲ။
အဘယ်ကြောင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် အရေးကြီးသနည်း။
သစ်တောကဏ္ဍတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် အရေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက် သူများသည် ၎င်းတို့အပေါ်သက်ရောက်နေသည့် ဥပဒေများ၊ မူဝါဒများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များ ကိုရယူ နိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုသည်ကောင်းမွန်သော သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွက် အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
၎င်းသည်အတရားဝင်ဖြစ်မှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ဥပဒေရေးရာ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့် ပါဝင်မှုတို့ကို ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုပေးပါသည်။
၎င်းသည်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော စေ့စေ့စပ်စပ်စစ်ဆေးခြင်းကိုဖြစ်မြောက်စေပါသည်။
၎င်းသည်ဈေးကွက်များအနေဖြင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်များ နှင့် ၎င်းတို့၏ အကျိုးသက် ရောက် မှုကို ပို၍ပို၍ နားလည်ရန်လိုအပ်စေပါသည်။
၎င်းသည်သစ်တောအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းစေပါသည်။
မတူသည့်အချက်မှာ သစ်တောကဏ္ဍတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလျှင် ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆောင်ရွက် ရန်သဘောတူညီချက် (VPA) ကတိကဝတ်များကို အားနည်းသွားစေပြီး ဖုံးကွယ်ခြင်း၊ မှုခင်း များနှင့် အကျင့်ပျက် ခြစားမှုများပင် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းသည် အင်အားကြီး တစ်သီးပုဂ္ဂလများအား ၎င်း၏ မိတ်ဆွေနှင့်ဆွေမျိုးများကိုသစ်ခုတ်ခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် တရားမဝင်အမြတ် များရယူခြင်း၊ ကုမ္ပဏီများအား သက်ဆိုင်သောခွင့်ပြုမိန့်၊ အခွန်အခများမရှိပဲ သစ်ခုတ်ခွင့်၊ ရောင်းချခွင့် တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းသည် အစိုးရများဘဏ္ဍာငွေဆုံးရှုံးပြီး အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် ၎င်းတို့ မြေယာများထိန်းချုပ်ခွင့်ကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိလျှင် နိုင်ငံသားများသည် သစ်တော သယံဇာတများ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် ပါဝင်ရန်လည်းရုန်းကန်ရသည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မကြာခဏဆိုသလို ဝေဖန်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ လေ့လာမှုများကအကျိုး ဆက်စပ် ပတ်သက် သူများအကြား သတင်းအချက်အလက်ရယူသုံးစွဲခွင့်မရှိခြင်းသည် အငြင်းပွားမှုကို မည်မျှ အထိဖြစ်လာစေကြောင်း အထောက်အထားပေးပါသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဆိုပါ အငြင်းပွား မှုများကို လျှော့ချ ပေးပြီး သစ်တောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အား ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာစေခြင်းဖြင့် ဖြစ်လာနိုင်သည့် အငြင်းပွားမှုများကို လျှော့ချေပေးသည်။
ရှုထောင့်။ ။ လိုင်ဘေးရီးရားနိုင်ငံရှိ သစ်တောလူမှုအဖွဲ့အစည်းအား ကိုယ်စားပြုသည့် Matthew Walley
လူတွေက အလိမ်ခံနေရတယ်လို့ ခံစားနေရတယ်။ သူတို့ရဲ့ သစ်တောတွေထဲကနေ သစ်လုံးတင်ထား တဲ့ကားကြီး တွေထွက်သွားတာကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့နေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘယ်လောက်ပမာဏနဲ့ ဘာသစ်အမျိုးအစား တွေထုတ်ယူသွားသလဲသိရဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့ ဘယ်သူမှမပြောပြကြလို့ ကျွန်တော် တို့ကို အဲဒီသစ်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ တန်ဖိုးပေးနေခြင်းရှိမရှိဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို သိနိုင်မှာလဲ။"
Source: Global Witness. 2012. African timber-exporting countries failing to meet access to information commitments. Press release.9October 2012 [အွန်လိုင်းမှ ဖတ်ရှုရန်]
VPA တစ်ခု၏ စာသား၊ နောက်ဆက်တွဲများနှင့်အတူ VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာ ခြင်းကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
သိသာမြင်သာမှု။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်တိုင်က အလွန်အကြည့်ခံပါသည်။ ၎င်းက တခါးဖွင့် ထားပြီး နိုင်ငံ၏ သစ်တောကဏ္ဍကို အမျိုးသားအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှစိစစ်နိုင်ရန်ပင် မြင်သာအောင် ပြထားပါသည်။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများပါဝင်ခြင်း။ EU မှ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပါဝင်ရန် ထောက်ခံ အကြံပြုထားပါသည်။ ကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်ခြင်းသည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ အခြား ရှုထောင့်ဖြစ်သည့် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်နှင့် လိုအပ်သော ဥပဒေပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုများကဲ့သို့ VPA ၏ အရေးပါသော ရှုထောင့်များနှင့်ပတ် သက်၍ပွင့်လင်းမြင်သာလာအောင် ဖန်တီးပေးသည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား သူတို့၏အမြင်များကိုဖော်ထုတ်ရန်၊ အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်များကိုဝေဖန်ဆွေးနွေးရန်၊ VPA စာသားနှင့် နောက်ဆက်တွဲများကိုလွှမ်းမိုးရန်နှင့် VPA လုပ်ငန်းစဉ် ကိုယ်တိုင်ကိုထောက်ကူပါသည်။ VPA တစ်ခုစီ၏ အဓိကစာသားတွင်ပါသည့် စာပိုဒ်တစ်ခုသည် VPA အကောင်အထည်ဖော်စဉ်အတွင်း အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင် ပတ်သက်မှု၏ အရေးပါမှုကိုအားဖြည့် ထားပါသည်။
ယနေ့အထိ VPAs လက်မှတ်ထိုးပြီးသမျှနိုင်ငံများသည် အမျိုးသားအဆင့်အကောင် အထည်ဖော်ရေးဖွဲ့ စည်း တည်ဆောက်ပုံများနှင့် ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီများတွင် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်း နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ထည့်သွင်းထားခဲ့ပါသည်။
VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ VPA မှပါဝင်ခြင်းကို မည်ကဲ့သို့တိုးမြှင့်နိုင်သနည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အခန်းတွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ဆက်သွယ်ရေး။ နိုင်ငံများသည် VPA လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း အသိပေးရာတွင် ခြားနားစွာချဉ်းကပ်ကြပါသည်။ ချဉ်းကပ်ခြင်းများတွင် မူဝါဒအတိုချုပ်နှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပွဲအကျဉ်းချုပ်ကို ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲပြုလုပ်ခြင်း၊ VPA ဆွေးနွေးနေစဉ် ဝက်ဘ်ဆိုက်များဖြင့်ဖော်ပြခြင်းနှင့် ပူးတွဲ အကောင်အထည်ဖော်သည့် ကော်မတီ၏အစီရင်ခံစာများကိုထုတ်ပြန်ခြင်းများပါဝင်သည်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အခန်းတွင် ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါ။
လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်း။ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ခြင်းသည် VPA တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်တွင် မဖြစ်မနေပါဝင်ရမည့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ စာရင်းစစ်ခြင်းသည် တရားဝင်သစ် ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် အစီရင်ခံခြင်းဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ စာရင်းစစ်သည် EU နှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံ (အများအားဖြင့် ပူးတွဲအကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ) သို့အစီရင်ခံပြီး အများပြည်သူသို့ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်သည်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အများပြည်သူသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲ။ အများပြည်သူ သတင်းအချက် အလက်နှင့်ပတ်သက်သည့်VPA နောက်ဆက်တွဲသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများက သစ်တောကဏ္ဍ အတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအားဖြည့်ရန် နှင့် VPA အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်မြောက်စေရန် အများပြည်သူသိသင့်သည်ဟု ယူဆသည့် စာရွက်စာတမ်း များနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ထားသည်။ အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များသည် လွတ်လပ်သည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ ၏အလုပ်အတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ အချို့ VPA နိုင်ငံများတွင် သတင်းအချက်အလက်မျှဝေရန် ဝက်ဘ်ဆိုက် များဖန်တီးထားသည်။ ဥပမာ ကင်မရွန်းနှင့် ကွန်ဂိုသမ္မတ နိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။ VPA ဆိုင်ရာ ကိုးကားစရာများ၏ အများပြည်သူ သတင်းအချက်အလက် နှင့်ပတ်သက်သည့် VPA နောက်ဆက်တွဲတွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှု။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏တရားဝင်သစ် ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်တွင် မည်သူကမည်သည့်တာဝန်ရှိသည်ကို ရှင်းလင်းစေသည်။ ပါဝင် သည့်အဖွဲ့များသည် သဘောတူညီချက်ပါ စာသားနှင့်နောက်ဆက်တွဲများ နှင့် အကောင်အထည် ဖော်သည့် အဆင့်တွင် ထွက်ပေါ်လာသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်ပါ တာဝန်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရှင်းလင်းသော တာဝန်များသည် မည်သူကဥပဒေအကျိုးသက်ရောက်ရေး အတွက် တာဝန်ခံရသည်နှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူက လေးစားလိုက်နာရန်မည်သည်တို့ကို လုပ်ရမည် စသဖြင့်နားလည်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
ဥပဒေရေးရာနားလည်မှု။ နိုင်ငံအများစုတွင် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် ဥပဒေအရ လိုအပ်ချက်ကို နားလည်ရန်နေနေသာသာ ဥပဒေစာသားများကိုကြည့်ရှုရန် အခွင့်အလမ်းရရန်ပင် ရုန်းကန်ရလေ့ရှိပါသည်။ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရန် VPA ဆွေးနွေးပွဲများ သည် အစိုးရအား သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများကို အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက် သူများ သိရှိဆွေးနွေးနိုင်ရန် အများပြည်သူ လက်ဝယ်သို့ချပြခြင်းကို အားပေးသည်။ ယနေ့အထိ VPA လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဥပဒေကိုရယူအသုံးပြုနိုင်ရေး ကူညီလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ဥပဒေပြုရေးမူဘောင်များကို ပိုမိုပွင့်လင်းစေရေးလုပ်ဆောင်ရန် အထောက်အပံ့ပေးသည့် အစီအစဉ်များသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သယံဇာတများအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့ပါသည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအတွက် VPA ကိုနားလည်ရန်၊ အကောင်အထည် ဖော်ရန် နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် FLEGT လိုင်စင်ပေးခြင်းကို အမျိုးသားအဆင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၊ EU တင်သွင်း သူများ နှင့် သုံးစွဲသူများအကြား ယုံကြည်မှုကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးသည်။ သို့ရာတွင် သစ်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံ အများစုသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ယခင်ကအာရုံသိပ်မစိုက်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် အစိုးရများအတွက် VPA ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ကတိကဝတ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အချိန်ပေးရနိုင်သည်။
အချို့နိုင်ငံများသည် သတင်းအချက်အလက်များ စီမံရန် နှင့် မျှဝေရန်စနစ်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖန်တီး ဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် သတင်းအချက်အလက်များသည် ပြည်သူထူထုက သိပြီး သို့မဟုတ် သုံးနိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း ရှာဖွေရန်နှင့် မျှဝေရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဥပမာ လိုင်ဘေးရီးယား ကဲ့သို့ အခြားကိစ္စများတွင် ဉပဒေအများစုသည် အီလက်ထရောနစ်စနစ်ပုံစံဖြင့်မရှိသလို စာအုပ်စာတမ်း အနေဖြင့်လည်းရရှိနိုင်ရန် ရှားပါးသည်။
VPA အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရများ အနေဖြင့် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်ကဲ့သို့သော နည်းပညာဆိုင်ရာ ရှုထောင့် အား အုပ်ချုပ်ရေး စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးထက် ပိုမိုအာရုံစိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသည် အခြား သောအကြောင်းကိစ္စရပ်များသို့ ကူးပြောင်း သွားကြသည်နှင့်၊ သို့မဟုတ် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ရေး ရှေ့ဆက်တိုးလုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရာတွင် ဖြစ်အောင်အခြေအနေကို ဖန်တီးယူ လိုစိတ်မရှိကြပါ။
နောက်ထပ် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်မှာ အချိန်တိုအတွင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု တိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်မှု သည် သစ်တောကဏ္ဍအပေါ် မီးမောင်းထိုးနေပြီး နိုင်ငံအားဝေဖန်ခံရရန်ဖော်ထုတ်ပြ သသကဲ့သို့ဖြစ်နေ သည်။ ဝိရောဓိ အနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နေသည့်နိုင်ငံများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို အားမပေးသော နိုင်ငံများ ထက် ပိုမိုအဝေဖန်ခံရနိုင်သည်။ သို့သော် ရေရှည်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု တိုးတက်သော နိုင်ငံများသည် နိုင်ငံ၏ သစ်တောကဏ္ဍကို မည်သို့စီမံခန့်ခွဲသည်ဆို သည့်အချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဈေးကွက်ဝယ်လိုမှုသတင်းအချက်အလက် ပိုမိုများပြားစွာ ရရှိလာသောကြောင့် အကျိုးအမြတ် ရရှိရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
ဥပမာ။ ။ အင်ဒိုနီးရှားတွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် တာဝန်ခံမှု
အင်ဒိုနီးရှား သစ်တောဝန်ကြီးဌာနမှ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်အရ တရားဝင်ကြောင်း စီစစ် အတည်ပြုထားသည့် သစ်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီအားလုံး၏စာရင်းကို ၎င်း၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ စာရင်းစစ်များနှင့် တင်သွင်းသူများသည် ၎င်းစာရင်းဖြင့် တင်ပို့ကုန်လိုင်စဉ် တရားဝင်ဖြစ်မဖြစ် စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်သည် လိုင်စင်ချပေးခြင်းသတင်း အချက်အလက် ယူနစ်သို့ မေးမြန်းချက်များကိုပို့ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ ၎င်းယူနစ်သည် လိုင်စင်တစ်ခုစီ၏ သတင်း အချက်အလက်များကို သတင်းအချက်အလက်စနစ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ EU မှ ကျွမ်းကျင်သည့် အာဏာပိုင်များသည် စနစ်ကိုစစ်ဆေးပြီး ယူနစ်သို့မေးမြန်းချက်များ ပေးပို့နိုင်သည်။ အနာဂတ်တွင် ကျွမ်းကျင်သည့် အာဏာပိုင်များသည် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် အာဏာပိုင်များအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ပေးသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုတိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
စွမ်းဆောင်ရည်ကို VPA မှ မည်ကဲ့သို့ အားဖြည့်ပေးနိုင်သနည်။
VPA မှ တာဝန်ခံမှုကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သနည်း။